Ardayda Jaamacada PSU Garowe Oo Bilaabay Olole Lagu Xaqiijanayo Fayadhowrka Cuntada – Radio Daljir
Abriil 4, 2015 1:52 b 0
Sabti, Abriil 04, 2015 (Daljir) —Xafiiska agaasinka arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Garoowe oo kaashanaya ardayda kulliyadda caafimaadka ee Jaamacada PSU ayaa magaalada Garoowe ka bilaabay wacyigelin iyo baaritaan lagu hubinayo fayadhowrka noocyada cuntada.
Barnaamijkaan oo socon doona mudo bil ah ayaa waxaa bulshada gaar ahaan gacansatada looga wacyigelindoonaa muhiimada fayadhowrka, waxaana lagu baari doonaa tayada cuntada, dawooyinka iyo khudaarta cagaaran silooga hortago cudarada kadhasha cuntada dhacday iyo khudaarta sumaysan.
Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee degmada Garoowe Cabdirashiid Ciise Cabdi ayaa sheegay in barnaamijkaani uu waxbadan ka bedeli doono caafimaadka bulshada, wuxuuna bulshada kunool magaalada Garoowe ka codsaday inay ardayda u fududeeyaan shaqada ay hayaan.
Xaliimo Cabdulqadir Barre agaasimaha arrimaha haweenka iyo xaafadaha magaalada Garoowe ayaa sheegtay in cudurada kudhaca bulshada intoodabadan ay sababaan cuntooyin xilligoodii dhacay ama khudaarta dawaysan, waxaana ay ganacsatada ka codsatay inay ka shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa.
Gudoomiyaha ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacada PSU Garoowe Cabdishakuur Maxamuud Xasan ayaa sheegay in wacyigelintaani ay tahay mid ardaydu isu xilqaameen aysana jirin cid dhaqaale kusiinaysa, wuxuuna intaas ku daray in marka ay dhameeyaan ay soo bandhigi doonaan xogta baaritaankooda oo dhamaystiran.
Wacyigelintaan iyo baaritaankaan caafimaad ayaa kusoo beegmaysa xilli lagu jiro waqtiga kaliisha ee xilli roobaadka guga, waxaana magaalooyinka gaar ahaan suuqyada kadhasha cuduro bulshada soo wajaha hadii aan laga hortegin.
By: Abdirashiid Abdurahman
BARNAMIJKII MAAN-HADAL _SABTI_04 [DHAGAYSO]